E-News Nepali || Fast and Accuracy » पोर्चुगल हिँडेका ३ नेपालीलाई कोरोनाको लक्षण देखिएपछि फ्रान्समा रोकियो, कस्तो छ उनीहरुको अवस्था ?
पोर्चुगल हिँडेका ३ नेपालीलाई कोरोनाको लक्षण देखिएपछि फ्रान्समा रोकियो, कस्तो छ उनीहरुको अवस्था ?
काठमाडौं – चीनबाट उत्पन्न भएको कोरोना भाइरस दक्षिण कोरियामा थप ५१८ जना नयाँ संक्रमित फेला परेसँगै देशमा कूल संक्रमितको सङ्ख्या ६ हजार २८४ जना पुगेको छ । दक्षिण कोरियामा हालसम्म ४३ जनाको मृत्यु भएको छ जसमा वृद्ध र पुरानो स्वास्थ्य समस्या रहेका छन् । हालसम्म दक्षिण कोरियामा नेपालीको अवस्था सामान्य रहेको कोरियामा रहेका पर्वतका राधाकृष्ण सुवेदीले ओएस नेपाललाई जानकारी दिए ।
सुवेदीका अनुसार सम्बन्धित कम्पनी बाहेक नेपालीहरु बाहिर निस्किएका छैनन् । हालसम्म कोरियामा ४२ हजार नेपाली रहेका छन् । कोरियामा रहेका कृष्ण भन्छन् भाइरस छिट्टै नियन्त्रणमा आउने संभावना भएका कारण उनी तत्कालै स्वदेश फर्किन आवश्यक देख्दैनन् । नेपालमा रहेका आफन्तलाई आँफुहरु सुरक्षीत रहेको कारण नआत्तिन पनि कृष्णले अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै अमेरिकामा निधन हुनेको संख्या १२ पुगेको छ ।
जसमध्ये ११ जना वासिङ्टन राज्यका रहेको बिबिसीले जनाएको छ । सिएन एनका अनुसार उक्त राज्यमा देखिएको संक्रमणका अधिकांश बिरामी सियाटलको किर्कल्याण्डमा रहेको एउटा नर्सिङ सेन्टरसँग सम्बन्धित रहेका छन् । उता टेक्सासमा १४ संक्रमित फेला परेका छन् । जसका कारण यो रोगको संक्रमण हुने ब्यक्तिको संख्या भने १ सय २९ पुगेको छ । त्यस्तै क्यालिफोर्नियाले क्रुज जहाजमा यो रोगको संक्रमण फैलीएपछि सरकारलाई ब्यस्थापन गर्न ठूलो चुनौती देखा परेको छ ।
प्रकाशित मिति २४ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०७:३९